Mainty ny efijery iPhone-ko! Ity ny tena antony. - Iphone
hampitombo ny haben'ny font amin'ny iphone
misokatra ny fampiharana mozika nataoko
ny fomba fandefasana hafatra milay ios 10
iphone se voicemail tsy mandeha
tsipika mitsangana eo amin'ny efijery ipad
Efa mandeha ny iPhone-nao, fa mainty kosa ny écran. Maneno ny iPhone-nao, saingy tsy afaka mamaly ny antso ianao. Ianao dia nanandrana namerina namerina ny iPhone, namela azy ho lany bateria ary hamerina azy hiverina, ary ny efijery iPhone dia mbola mainty . Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava aho maninona no lasa mainty ny efijery iPhone-nao SY inona no azonao atao hanamboarana azy.
Fa maninona no mainty ny efijery iPhone-ko?
Matetika ny efijery mainty dia vokatry ny olan'ny fitaovana amin'ny iPhone, ka matetika tsy misy fanamboarana haingana. Voalaza fa fianjerana lozisialy afaka ataovy mangatsiaka ny mainty aseho ary manjary mainty ianao, koa ndao andramo ny famerenana mafy hijerena raha izany no mitranga.
Mba hanaovana famerenana mafy dia tsindrio ary tazomy ilay bokotra herinaratra (fantatra koa amin'ny bokotra Torimaso / Mifoha) ary ny Bokotra an-trano (ny bokotra boribory eo ambanin'ny fampiratiana) miaraka mandritra ny 10 segondra.
Ao amin'ny iPhone 7 na 7 Plus, manao reset mafy ianao amin'ny alàlan'ny fanindriana sy fihazonana ny bokotra midina ary ny bokotra herinaratra Mandritra izany fotoana izany mandra-pahitanao ny sary famantarana Apple hita eo amin'ny efijery.
Ary raha manana iPhone 8 na vao haingana ianao dia manaova famerenanana mafy amin'ny alàlan'ny fanindriana haingana sy famoahana ny bokotra miakatra haingana, avy eo dia tsindrio haingana sy alefa ny bokotra ambany, ary avy eo dia tsindrio ary tazomy ny bokotra herinaratra (iPhone 8) na ny bokotra ankilany (iPhone X na vaovao) mandra-pahatongan'ny fisehoan'i Apple.
Raha miseho eo amin'ny efijery ny sary famantarana Apple, dia mety tsy misy olana amin'ny fitaovan'ny iPhone - lozam-pifamoivoizana io. Zahao ny lahatsoratro hafa amin'ny iPhones mangatsiaka , izay hilaza aminao izay tena tokony hatao hanamboarana ny iPhone. Raha tsy miseho eo amin'ny efijery ny sary famantarana Apple, tohizo ny famakiana.
Andao hojerentsika ao anatin'ny iPhone-nao
iPhone Board Logic
Ny fitsidihana fohy ny atin'ny iPhone dia hanampy anao hahatakatra ny antony mainty ny efijery. Misy fitaovana enti-miasa roa horesahintsika: ny iPhone-nao miseho ary ny lozika lojika .
Ny tabilao lojika dia ny ati-doha ao ambadiky ny fiasan'ny iPhone, ary ny faritra rehetra amin'ny iPhone dia mifandray aminy. ny miseho mampiseho anao ny sary hitanao, fa ny lozika lojika milaza izany inona aseho.
Fanesorana ny fampisehoana iPhone
Ny fisehoana manontolo an'ny iPhone dia azo esorina, saingy sarotra be noho ny mety hoeritreretinao! Misy singa efatra lehibe natsangana tao amin'ny fampisehoana ny iPhone:
Ny efijery LCD, izay mampiseho ireo sary hitanao amin'ny iPhone-nao.
ny digitizer , izay ampahan'ny fampirantiana mikarakara mikasika. izany digitizes ny rantsan-tànanao, izay midika fa mamadika ny fikasihan'ny rantsananao ho fiteny nomerika azon'ny iPhoneo izany.
Ny fakantsary miatrika anoloana.
Ny bokotra Home.
Ny singa tsirairay amin'ny fampisehoana iPhone dia misy misaraka mpampitohy izay miditra ao amin'ny tabilao lojika an'ny iPhone. Izany no mahatonga anao mety ho afaka hikorisa amin'ny efijery amin'ny rantsan-tànanao, na dia mainty aza ny efijery. Ny digitizer dia miasa, fa ny LCD kosa tsy mandeha.
Ny tapa-kazo mainty dia mikasika ny mpampitohy data
Amin'ny tranga maro dia mainty ny efijery iPhone anao satria lasa tsy mandeha ilay tariby mampifandray ny LCD amin'ny tabilao lojika. Ity tariby ity dia antsoina hoe ny mampiseho fampifandraisana data. Rehefa nesorina tao amin'ny tabilaon'ny lojika ilay mpampitohy data dia azo amboarina amin'ny alàlan'ny fampidirana azy ao anaty indray ny iPhone-nao.
Misy tranga hafa izay tsy dia tsotra loatra ny fanamboarana, ary eo no manimba ny LCD mihitsy. Rehefa mitranga izany dia tsy maninona na ny LCD dia mifandray amin'ny tabilao lojika na tsia - tapaka izany ary mila soloina.
Ahoana no ahalalako na tsy mandeha ilay seho na vaky?
Misalasala aho manoratra an'io satria tsy midika izany fa fitsipika sarotra sy haingana, fa izaho eFA nahatsikaritra lamina iray tamin'ny zavatra niainako niara-niasa tamin'ny iPhones. Tsy misy antoka azo antoka, fa ny fitsipiky ny ankiben-tanana dia izao:
ovay ny nomeraon-telefaona ao amin'ny icloud
Raha tsy niasa intsony ny fampisehoana iPhone anao taorian'izay nandatsaka izany ianao , mainty angamba ny efijeryo satria ny tariby LCD (mpampitohy data data) dia nesorina tamin'ny tabilaon'ny lojika.
Raha tsy niasa intsony ny fampisehoana iPhone anao taorian'izay lena, mainty angamba ny efijeryo satria tapaka ny LCD ary mila soloina.
Ahoana no manamboatra efijery iPhone mainty
Ny fomba safidinao handrosoana dia mety miankina amin'ny hoe ny fantsonao LCD iPhone dia nesorina tamin'ny tabilao lojika na raha tapaka ny LCD. Azonao atao ny mampiasa ny lalàko avy any ambony mba haminavina vinavina.
Raha nesorina ilay tariby LCD, ny Genius Bar ao amin'ny Apple Store MEY amboary maimaim-poana, na dia tsy misy fiantohana aza ny iPhone. Izany dia satria ny fanamboarana dia tsotra ihany: hosokafan'izy ireo ny iPhone-nao ary hampifandray azy ireo indray ilay tariby digitizer amin'ny tabilao lojika. Raha manapa-kevitra ny handeha amin'ity lalana ity ianao, manaova fotoana amin'ny Bar Genius alohan'ny hahatongavanao - raha tsy izany, mety hiafara mijoro mandritra ny fotoana fohy ianao.
Raha tapaka ny LCD dia tantara hafa izany. Mety ho lafo be ny fanamboarana ny fampisehoana iPhone, indrindra raha mandalo Apple ianao. Raha mitady safidy avo lenta sy lafo vidy ianao dia mamporisika anao hanin-kotrana , serivisy fanamboarana an-trano izay ho tonga aminao, amboary eo noho eo ny iPhone-nao, ary manome anao antoka maharitra mandritra ny androm-piainany.
Raha aleonao mahazo iPhone vaovao toy izay manamboatra ilay anao ankehitriny dia zahao ny UpPhone fitaovana fampitahana an-tariby . Azonao atao ny mampitaha ny vidin'ny smartphone rehetra isaky ny mpitatitra tsy misy tariby. Ny mpitatitra dia maniry ny hamindra anao amin'ny tambajotran-dry zareo, amin'izay mety ho hitanao fa afaka mahazo iPhone vaovao ianao amin'ny vidiny mitovy amin'ny fanamboarana ilay misy anao ankehitriny.
Ny fanamboarana ny iPhone-nao matetika dia tsy hevitra tsara
Ny visy miendrika kintana (pentalobe) dia mihidy ny iPhone
iPhones dia tsy natao hosokafan'ny mpampiasa. Topazo maso fotsiny ireo visy roa eo akaikin'ny seranan-tsambo misy ny iPhone-misy endrika kintana! Voalaza izany, any dia torolàlana fanamboarana tena tsara any raha mahatsapa adventurous ianao. Noraisiko ireo sary amin'ity lahatsoratra ity avy amin'ny torolàlana fanamboarana ao amin'ny iFixit.com nantsoina iPhone 6 Front Panel Assembly fanoloana . Ity misy sombiny fohy amin'ity lahatsoratra ity izay mety ho mahazatra anao:
“Rehefa manangona ny telefaoninao indray dia mety hipoaka ny mpampitohy azy ireo tariby fampisehoana. Izany dia mety hiteraka tsipika fotsy na efijery banga rehefa mandeha ny herinao. Raha mitranga izany dia ampifandraiso fotsiny ny telegrama sy ny herinaratra tariby amin'ny telefaoninao. ” Loharano: iFixit.com
Raha mino ianao fa ny fantsom-pifandraisanao iPhone LCD (fampisehoana tariby data) nanjary nesorina tsy ho eo amin'ny tabilao lojika, dia tena mahay tokoa ianao amin'ny teknolojia, ary tsy safidy ny fandehanana any amin'ny Apple Store, mampifandray ny tariby fampahalalana mampiseho amin'ny takelaka lojika. tsia fa sarotra, raha manana fitaovana mety ianao.
Ny fanoloana ny fampisehoana dia tena sarotra noho ny isan'ny singa tafiditra ao. Aleo hazava aho: izaho aza Manoro hevitra anao aho hiezaka ny hamaha ity olana ity amin'ny tenanao, satria mora loatra ny mamaky zavatra sy 'manisy biriky' ny iPhone.
Fantatrao izay tokony hataonao
Ny ankamaroan'ny mpamaky dia tsy ho afaka manamboatra ny efijery iPhone amin'ny alàlan'ny famakiana fotsiny ity lahatsoratra ity, satria ny efijery iPhone mainty matetika dia tsy vokatry ny olana momba ny lozisialy. Nizotra tsara ny zava-drehetra mandra-pahamaintin'ny efijery iPhone anao Ankehitriny ianao tsy afaka mampiasa ny iPhone-nao mihitsy, fa ianao Aza fantaro izay hatao manaraka. Liana aho ny maheno ny fomba nanamboaranao ny iPhoneo ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany, ary ny traikefa azonao atolotra dia tsy isalasalana fa hanampy ireo mpamaky hafa manana olana mitovy amin'izany.
rehetra Sary iPhone ato amin'ity lahatsoratra ity nataon'i Walter galan ary manana fahazoan-dàlana ambanin'ny CC BY-NC-SA .